Tsangan-kevitra 95ni Lotera
Ny saikanosy dia tany saika hodidinin-dranomasina nefa misy tapany mampitambatra azy amin ny tany lehibe, nefa ny nosy dia voahodidina rano avokoa ny sisiny. Tsymitovy habe ny saikanosy ratria ao ireo ngeza ary ao ireo kelikely. Ny saikanosy madi ...
I Bisayas na Visayas na Kabisayaan na Kabisayan dia iray aminireo tagoronosy efatra lehibe mamorona ani Filipina izay hita ao aminny tapany afovoani Filipina, eo anelanelani mindanao sy i Luzon. Ireto avy ny lehibe aminireo nosy ao aminy: i Bohol ...
I Ginea Vaovao dia nosy ao Ôseania izay manakaiky ny Ranomasimbe Pasifika ao andrefana, manana velarana mirefy 775 210 km 2, ka laharana fahatelo aminny nosy be velarana indrindra eto an-tany, aoriani Aostralia sy i Groenlandy. Nosy ao avaratri A ...
I Kôrsa na Kôrsika dia nosy ao atsimoni Frantsa sady nosy fahefatra aminireo lehibe indrindra ao aminny Ranomasina Mediteranea. Atao hoe Corse izy aminny teny frantsay, fa Corsica kosa aminny teny kôrsa sy teny italiana ary Còrsega aminny teny li ...
I Somatra dia nosy ao andrefani Indonezia, isanny tangoro-nosini Sonda, ao Azia Atsimo-Atsinanana, sady mipetaka aminny fehiben-tany, ao atsimonny Saikanosy Maley. Mirefy 473 481 km 2, ny velarany, ka nosy fahafito lehibe indrindra eto aminizao t ...
Ny distrikani Manakara dia distrika ao aminny faritra Vatovavy-Fitovinany izay hita ao aminny tapany atsinanani Madagasikara, izay ahitana kaominina miisa 45.
I Broney na Soltanani Broney Darosalama dia firenena ao avaratry ny nosy Borneo, ao Azia Atsimo-Atsinanana. Itambarany amini Malaizia sy i Indonezia io nosy io. Hodidininny tapany atsimonny Ranomasini Sina izy sady voafefinny Firenena malaizianni ...
Ny fiteny indoneziana dia fiteny ofisialinny Repoblikan Indonezia. Anisanny fiteny miasa ihany koa io fiteny io any aminny Repoblikani Timaoro Atsinanana. Fiteny avy aminny fiteny malay bahasa Melayu ny fiteny indoneziana. Tsy tenin-dreninny anka ...
I Arktika dia ilay faritra manodidina ny tendron-tany avaratra eto amin ny tany, izay tafiditra ao anatin ny faribolan-tendron-tany avaratra sy ny manodidina mikasika io faribolana io. Ao amin i Arktika manontolo na aminny ampahany izany ireto fi ...
Ny fiteny nôrveziana dia fiteny jermanika tenenina ao Nôrvezy izay nanam-pototra ara-tantara avy amin ny fiteny nôroà tranainy, izay nampiasaina hatramin ny Andro Taloha tany Skandinavia. Ny Nôrveziana dia miantso ny fiteniny hoe norsk. Ny fiteny ...
Ny faribolan-tendron-tany arktika na faribolana arktika dia faribolana any amin ny faritra manodidina sy mahafaoka ny tendron-tany avaratra izay mampisy ny fotoana tsy mampiposaka ny masoandro amin ny ririnina tsy mampilentika ny masoandro amin n ...
Ny fiteny soedoà dia fiteny jermanika tenenina any avaratr i Eorôpa. Ny isan ny olona miteny io fiteny io dia folo tapitrisa; ny ankabeazan ny mpiteny soedoà dia any Soeda ary misy fianakaviam-be vitsivitsy any Finlandy, ireo firenena ireo mampia ...
Ny COVAX Facility dia ezaka iombonana natao mba hanampiana ny firenena mahantra hahazo amin ny vidiny mirary ny vaksiny fanefitra amin ny Covid-19, izay natsangana tamin ny volana Septambra 2020 ao amin ilay fikambanana iraisam-pirenena atao hoe ...
Ny Norwegian Missionary Society dia fikambanana misionera voalohany niorina tao Norvezy tamin ny taona 1842 tao amin ny tanànan i Stavanger izay nanao tanjona ny hampiely ny fivavahana kristiana amin ny mponina eto amin izao tontolo izao, indrind ...
Ny Helodrano Persika dia helodrano ao aminny Ranomasimbe Indiana mihazo ny morontsiraki Omàna, ny Emirata Arabo Mitambatra, i Arabia Saodita, i Katara, i Bareina, i Koety, i Iràka ary i Iràna. Tokony ho 233 000 km 2 eo ho eo ny velarany, 800 km n ...
I Irlanda na Irlandy na Repoblikani Irlandy dia firenena ao Eoropa izay ao aminny ampahany be aminny Nosini Irlandy ao amnny Ranomasimbe Atlantika avaratra. Azy ny 26 aminny komtea ao aminio nosy io ka ny enina sisa dia amitambatra amini Irlandy ...
Gabriel Lippmann dia mpahay fizika, mpamorona mizaka ny zom-pireneni Frantsa teraka ny 16 Aogositra 1845 ary maty ny 13 Jolay 1921 tao Ranomasimbe Atlantika
Ramsay MacDonald dia mpanao politika mizaka ny zom-pireneni Fanjakana Mitambatra teraka ny 12 Oktobra 1866 ary maty ny 9 Novambra 1937 tao Ranomasimbe Atlantika
Frederick Stark Pearson dia injeniera, mpiantoka, mpilalao vola mizaka ny zom-pireneni Etazonia teraka ny 3 Jolay 1861 ary maty ny 7 Mey 1915 tao Ranomasimbe Atlantika
I Manambato dia reniranon i Madagasikara mamakivaky ny distrikan i Vohimarina, ao amin ny faritanin Antsiranana, izay mivarina mankany atsinanana ao amin ny Ranomasimbe Indiana. Miampita eo aminy ny lalam-pirenena faha-5A.
I Sakalina na Sahalina dia nosy rosiana ao aminny tapany avaratra andrefanny Ranomasimbe Pasifika, ao aminny ranomasina manandify ani Siberia, 6 100 km miala ani Môsko. Atao hoe Сахалин / Sakhalin izy aminny teny rosiana.
I Maevarano dia onin i Madagasikara ao amin ny faritra Diana, ao amin ny faritanin Antsiranana, izay mivarina mankany atsinanana ao amin ny Ranomasimbe Indiana. 203 km ny halavany. Amin ireo renirano manompo azy dia i Sandrakota no lehibe indrindra.
I Sakanila dia reniranon i Madagasikara ao amin ny faritra Atsinanana, izay mivarina any amin ny Ranomasimbe Indiana ao Maintinandry ao atsimon i Vatomandry. Mifanapaka amin ny lalam-pirenena faha-11 izy ao andrefan i Maintinandry.
I Faraony dia reniranon i Madagasikara ao amin ny faritra Vatovavy-Fitovinany, ao amin ny faritanin i Fianarantsoa, izay mivarina avy ao afovoan-tany mankany atsinanana ao amin ny Ranomasimbe Indiana. 150 km ny halavany.
I Maningory dia onin i Madagasikara ao amin ny faritra Analanjirofo, ao amin ny faritanin i Toamasina, izay mivarina mankany antsinanana ao amin ny Ranomasimbe Indiana. Izy no mpamatsy rano ny farihy Alaotra. I Sandratsio kosa no lehibe indrindra ...
I Manampatrana dia reniranon i Madagasikara ao aminny faritra Atsimo-Atsinanana, ao aminny faritanini Fianarantsoa, izay mivarina mankany atsinanana ao aminny Ranomasimbe Indiana ao akaikini Farafangana. Ao atsimo-atsinananny tangorom-bohitr Andr ...
I Manajeba dia reniranon i Madagasikara any avaratra, izy manapaka ny lalam-pirenena faha-6 ao akaikin i Tanambao Marivorahona. Ao akaikin ny tangorom-bohitr i Tsaratanana no misy ny loharanony ary any amin ny Ranomasimbe Indiana no ivarinany.
I Saharenana dia onin i Madagasikara mivarina any atsinanana any amin ny Ranomasimbe Indiana ao amin ny faritra Diana. Manapaka azy ny lalam-pirenena faha-6 eo akaikin Antananandrenitelo. Ao akaikin i Joffreville ao amin ny tangorom-bohitra Amboh ...
Antainambalana na Antenambalana dia onin i Madagasikara ao amin ny faritra Analanjirofo, ao amin ny faritanin i Toamasina, izay mivarina mankany antsinanana ao amin ny Ranomasimbe Indiana ao amin ny helodranon Antongily, akaikin i Maroantsetra. I ...
I Loky na Lokia dia onin i Madagasikara ao amin ny faritra Sava, ao amin ny faritanin Antsiranana, izay mivarina amin ny Ranomasimbe Indiana. Ireto ny tanàna andalovanyː Ampasimaty, Masomamangy, Maromokotra, Antanamboa, Ambovonaomby ary Antanalar ...
I Namorona dia onin i Madagasikara ao amin ny faritra Vatovavy-Fitovinany, izay mivarina mankany antsinanana ao amin ny Ranomasimbe Indiana, 50 km atsimon i Mananjary. Ao akaikin Ambalakindresy no misy ny loharanony. Mamakivaky ny valan-javaboari ...
I Fanambana dia reniranon i Madagasikara ao avaratra izay manapaka ny lalam-pirenena faha-5a ao akaikin i Morafeno. Ao amin ny tangorom-bohitr i Marojejy no misy ny loharanony ary any amin ny Ranomasimbe Indiana ao atsimon i Vohimarina no ivarinany.
I Lokoho dia reniranoni Madagasikara any avaratra izay mivarina any amin ny morontsiraka avaratra atsinanana any amin ny Ranomasimbe Indiana. Manangona ny ampahan-drano avy amin ny tangorom-bohitra Marojejy izy. Any amin ny 25 km atsimon i Sambav ...
Ny Ranomasina Maty dia farihy masira ao Palestina any Atsinanana-Akaiky eo anelanelani Jordania sy i Israely any andrefana. mivarina ao aminy ony Jordana. Mirefy 1015 km 2 ny velarany, 85 km ny halavany ary 17 km ny sakany. Any aminny 392 m amban ...
Ny Ranomasina Egea dia ranomasina anaty tany ao aminny lembalemba mediteraneana eo anelanelani Eoropa sy Gresy ao andrefana, sy i Azia sy i Torkia ao atsinanana. Mivelatra hatrany aminny morontsiraka traka sy ny andilan-tanini Dardanela ao avarat ...
Ny Ranomasina Iôniana dia sampan ny Ranomasina Mediteranea izay manasaraka an i Gresy sy i Albania amin ny Saikanosy Italiana sy i Sisilia. Mifampitohy amin ny Ranomasina Adriatika ao avaratra amin ny alalan ny Lakandranon i Ôtranta.
Ny Ranomasina Tireniana dia ampahanny Ranomasina Mediteranea izay miendrika telolafy voafaritri Kôrsa sy i Sardinia ao andrefana ary ny Saikanosy Italiana sy i Sisilia ao antsimo. Ny Italiana miantso azy hoe Mar Tirreno fa ny Frantsay amanao hoe ...
Ny andilan-tany dia tany lavalava teriteny eo anelanelan ny ranomasina roa na helodrano roa, izay mampifandray tany roa bebe velarana kokoa. Mifanohitra amin ny andilan-tany ny andilan-dranomasina. Ohatra amin izany ny Andilan-tanin i Panamà.
Ny haavon-toerana dia ny elanelanny toerana iray aminny teboka na velarana iaingana, ity dia ny anny ranomasina ifanarahana, izay 0 m, raha ny toerana eto an-Tany no heverina. Refesina araka izany ny hahavonny tendrombohitra iray, ny haavonny toe ...
I Taheza dia renirano eto Madagasikara, mivarina any amin i Onilahy ao amin ny faritra Atsimo-Andrefana, ivarinan ny renirano roa hafa, dia i Hona sy i Beheoky. Avy avaratra mianandrefana ny zotrany. Renirano tsy mety ritra mandavan-taona noho ir ...
I Sahatavy dia reniranon i Madagasikara ao amin ny faritra Atsinanana, izay mamakivaky ny valan-javaboary Zahamena. Miorina eo amorony ny tanànan i Sahatavy. Manompo ny renirano Sahatavy ny renirano Sarondrina.
Betsiboka dia renirano any amin ny faritra avaratr i Madagasikara, mivarina any Mahajanga any amin ny vavaranon i Bombetoka. Misongadina izy noho ny lokondranony mena, vokatry ny fiangonanan ny potika vatolampy miloko mena voasary. Misy fitrangan ...
I Ramena dia reniranon i Madagasikara ao avaratra andrefana ao amin ny faritra Diana. Ao Maromokotra no ipoirany ary izy no renirano lehibe indrindra manompoa an i Sambirano.
I Morondava dia reniranoni Madagasikara any andrefana, ao aminny faritra Menabe, izay mivarina mankany amin ny tanànani Morondava ao aminny Lakandranoni Môzambika.
I Bemarivo dia onin i Madagasikara, any avaratra, ao amin ny faritra Sava, ao amin ny faritanin Antsiranana, izay mivarina mankany atsinanana ao amin ny Ranomasimbe Indiana, ao avaratr i Sambava. Manondraka ny faritra amin ny morontsiraka avaratr ...
Ihosy dia reniranon i Madagasikara ao amin ny faritanin i Fianarantsoa ao afovoan-tany. Mikoriana avy any amin ireo tendrombohitr i Bekisopa izy ka mamakivaky ny tanànan Ihosy. Ny reniranon Ihosy no iandohanny ony Mangoky izay mivarina any amin n ...
I Onilahy na Oñelahy na Oñilahy dia renirano any amin ny faritra atsimo-andrefan i Madagasikara, ao amin ny faritanin i Toliara. Mahatratra 31 600 km 2 ny lemaka azony sy ireo rano anompo azy tondrahana, 145 m 3 /s ny habetsahan ny korian-dranony ...
Ivondro dia reniranon i Madagasikara izay mamakivaky ny faritra Atsinanana sy ny faritra Alaotra-Mangoro ao amin ny faritanin i Toamasina, izay mivarina mankany atsinanana ao amin ny Ranomasimbe Indiana. 150 km ny halavany. Ireto ny tanàna lalova ...
I Mananara dia onin i Madagasikara ao amin ny distrikan i Farafangana, faritra Atsimo-Atsinanana, ao amin ny faritanin i Fianarantsoa, izay mivarina mankany antsinanana ao amin ny Ranomasimbe Indiana ao Ampasinakoho, akainy an i Vangaindrano. Ny ...
I Onive dia reniranon i Madagasikara ao atsinanana izay mipoira avy any amin ny tangorom-bohitr Ankaratra. Izy no renirano lehibe indrindra manompo an i Mangoro. Misy riam-be manana haavo 30 m ity renirano ity ao atsimo andrefan i Tsinjoarivo.
Fivondronanny Fiangonana Batista Bibl ..
Lisitra ny kabupaten sy ny kota any I ..